Puntland oo amartay ciidamada xili wasaarada amnigu sheegtay in Al-shabaab ay fulinayaan weeraro – Radio Daljir
Oktoobar 16, 2013 3:36 b 0
Garoowe, October 16, 2013 – Wasaaradda amniga ee Puntland ayaa shaacisay in ay heleen xogo hor leh oo muujinaya in ay ururka Al-shabaab damacsan yihiin fulinta weeraro khasaare badan dhaliya, kuwaas oo ka dhacaya meelo ka mid ah dalka oo ay ku jirto Puntland.
Col. Khaliif Ciise mudan wasiirka amniga ee Puntland waxaa uu sheegay in ay heleen macluumaad muujinaya in ururka Al-shabaab ay weeraro fuliyaan wakhti dhow, waxaa uu sheegay in qorshaha ay ku jirto Puntland.
Wasiirka ayaa saxaafada u sheegay in ururku ay shirar la xiriira abaabulka weeraradaas iyo sida ugu fudud ee lagu fulin karo ay xilligan ka wadaan magaalada Baraawe ee gobolka shabeelaha hoose.
Puntland waxay sheegtay in ay ka hortegayso isku day kasta oo ay samayso Al-shabaab, kaas oo lagu damacsan yahay in lagu khalkhal geliyo amniga Puntland, wasiirka ayaa ciidamada faray in ay feejignaan galaan.
Ciidamada amaanka ee Puntland ayaa inta badan lagu amraa in ay heegan sare galaan, waxaa jiray dhowr jeer oo hore weeraro ka dhacay meelo ka mid ah gobolka, kuwaas oo Puntland ku eedaysay ururka Al-shabaab waxaa kaloo jiray kuwo la fashiliyey.